File Manager - Android အတွက် File Explorer - Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က - Android အတွက် Explorer ကို File
file ကိုမန်နေဂျာ - အန်းဒရွိုက် APK ကိုများအတွက် Explorer ကို File
file manager အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး file ကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူ, အစွမ်းထက် features တွေနှင့်အတူ Android device ကိုမန်နေဂျာများအတွက် file ကို tool ကို: Copy ကူး, ဖြတ်, ငါးပိ, အမည်ပြောင်း, ချုံ့, လွှဲပြောင်း download, ...
file manager app ကိုအမျိုးအစားအလိုက်ဖိုင်စည်းရုံးရေးမှူးနှင့်အတူသုံးစွဲဖို့တကယ်လွယ်ကူပြီးအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်: ပုံများ, Music, Movies, စာရွက်စာတမ်းများ, Apps ကပ ...
Android အတွက်ဒီ app မန်နေဂျာနှင့်အတူသင်အလွယ်တကူပြည်တွင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ / cloud storage စီမံခန့်ခွဲ, ကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် အစိုင်အခဲရှာဖွေသူ ဖိုင်တွေ app ကို၎င်း၏ဒါအေးမြအသုံးပြုမှုမန်နေဂျာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖိုင်မန်နေဂျာဟာ android app ကို, သိုလှောင်မှုမန်နေဂျာနှင့် releven features တွေအများကြီး။
စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အချက်အလက်, ရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, ဂီတ, applications များ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်နှင့်အကြိုက်ဆုံးများ: - Browser ကိုအမျိုးအစားအားဖြင့်အလွယ်တကူဖိုင်များကို။
- SD ကဒ်ထဲမှာဒေသခံ device ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲအားလုံးကိုဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများကိုစီမံကွပ်ကဲ။ app ကိုမှတဆင့်ဖိုင်စနစ်, မြေတပြင်လုံးသိုလှောင်မှုစနစ်များ Browse
- ပံ့ပိုးမှုဖြင့် Wi-Fi မုဒ် & ဖန်တီးဟော့စပေါ့ ဖိုင်မျှဝေခြင်း
- သိုလှောင်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ဒေသခံ Storage ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးမကျဖိုင်တွေကို clean up.
- file transfer: လွှဲပြောင်း apps များ, ပုံများ, ဂီတ, စာရွက်စာတမ်းများ, ရုပ်ရှင်ဝိုင်ဖိုင်ကနေတစ်ဆင့်
- ဖိုင်မန်နေဂျာ: ဖြတ်, မိတ္တူ, ငါးပိနှင့်သင်၏ဖိုင်များကိုစီမံအမည်ပြောင်းနှင့်ကာ microSD card ကို, LAN, ဒါမှမဟုတ်တိမ်တိုက်သိုလှောင်မှုထဲကနေစစ်ဆင်ရေးချုံ့
- LAN ထဲမှာ Access ကိုဖိုင်ကို: HTTP မှတစ်ဆင့်သင်၏ LAN ဝိုင်ဖိုင်အတွင်းစီမံခန့်ခွဲဖိုင်တွေ
- cloud storage ကနေတစ်ဆင့်ပိုသိုလှောင်မှုကိုရွေးချယ်စရာ: ထိုကဲ့သို့သော Dropbox ကို, Google Drive ကို, တစျခုမှာ Drive ကို, ထောင့်ကွက်အဖြစ်မိုဃ်းတိမ်ကို drive ကိုအကောင့်ထောက်ပံ့
- ပုံများ: ပုံရိပ်နှင့်ရုပ်ပုံသင်၏သိုလှောင်မှုဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်။ preview: bmp, gif, jpg, png ...
- audio: ဂီတကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ဖိုင်တွေအသံ။ audio formats တွေကို: WAV, mp3, ogg, es, FLAC, m4p, WAV, WMA ...
- ဗီဒီယိုများ: device ကိုဗီဒီယိုဖိုင်များကိုစီမံ။ ဗီဒီယိုကိုကို formats: asf, AVI, FLV, mp4, MPEG, WMV ...
- စာရွက်စာတမ်းစည်းရုံးရေးမှူး ငါ၏အစာရွက်စာတမ်းများအဘို့, စာရွက်စာတမ်းသိုလှောင်မှု: device အတွက်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းဖိုင်များကိုစီမံ။ ဖိုင် Format: doc, ppt, pdf, es ...
- Apps ကပ: device အတွက် install လုပ်ပြီးသားအားလုံး applications များကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျ apk ဖိုင်အဖြစ်ကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ် app များကို delete, apps တွေရဲ့ဒေတာသို့မဟုတ်ငွေသားကိုဖျက်, backup လုပ်ထား app ကိုပေးနိုင်သည်။
- Downloads: သင့်ရဲ့ device အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ Manager ကိုအားလုံးဖိုင်များ,
- တိမ်တိုက်ကားမောင်းသူ: ထိုကဲ့သို့သော dropbox, google drive ကိုနှင့် One Drive ကိုအဖြစ်သင်၏မိုးတိမ်သိုလှောင်မှုကိုရယူသုံး။
- PC ကွန်ပျူတာဖိုင်လွှဲပြောင်း (wifi ရှာဖွေသူမှတဆင့် shareit): ရလွယ်ကူတယ် လွှဲပြောင်းဖိုင်များ, ဂီတလွှဲပြောင်း, လွှဲပြောင်းဓာတ်ပုံများ sharefile မှ PC ကိုရန်အမြန်ဆုံးလမ်း, ဝေစုဓာတ်ပုံများ, ရှယ်ယာဂီတ။
- Store ကို Analyzer: Analyzer ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ
- junk သန့်စင် (ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုမှလင့်ခ်): သန့်ရှင်းဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, ဖိုင်တွဲအပိုအာကာသသိုလှောင်မှုရဖို့မြေတပြင်လုံးကိုမိုဘိုင်းသိုလှောင်မှု scan နှင့်သန့်ရှင်းရေး, ပိုမိုဖိုင်သိုလှောင်မှု
- audio မန်နေဂျာ, စာရွက်စာတမ်းမန်နေဂျာ
- zip tools များ: 7zip, WinRAR, rar, zip, winzip နဲ့တူအမျိုးမျိုးသော zarchiver tools များ အသုံးပြု. ဖိုင်တွေချုံ့ရလွယ်ကူတယ်
ဇစ်, rar, 7z, 7zip, ကတ္တရာစေး gz, tgz: - ကို formats ထောက်ခံ Compress
- ပေါင်းစည်းဖိုင် unzipper, မော်ကွန်းမှထုတ်ယူခဲ့ပြီ tools များ: သင် app ကိုအတွင်းချက်ချင်းဖိုင်များကို extract နိုင်ပြီး Third-party app ကို install လုပ်မလိုအပ်ပါဘူး
- လွယ်ကူစေရန် ဖိုင်တွေဇီပ်အသုံးပြု unrar ဇစ်ဖိုင်ကို extractor 7z extractor လိုပဲ ဇစ်ဖိုင်ကိုဖွင့် အခမဲ့
- သုံးပြီးဖိုင်တွေကိုပို့ပါ ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေးပို့ API ကို SDK ကိုတစ်ဦးကုဒ်ကြောင့်ဝေမျှ
- sd card ကိုမန်နေဂျာ android ဖုန်း tool ကို: sd ကဒ်မန်နေဂျာများအတွက် Tools များကဲ့သို့အသုံးပြုမှုအသံအတိုးအကျယ်, မိတ္တူ, ဖြတ်, ငါးပိ, ဖိုင်များရွှေ့ & sd ကဒ်မှပေးပို့
- ဒေတာကိုမန်နေဂျာ & ဒေတာ transferhttp ဖိုင် transfer protocol ကနေတဆင့် "ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေးပို့", အီးမေးလ်, sms ကို ... & ဖိုင်ကို PC ကိုမှလွှဲပြောင်း: file ကိုအမျိုးမျိုးသော tools တွေကိုသုံးပြီးခွဲဝေမှု
- မိုးတိမ်သိုလှောင်မှု: တစ် shere link ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် fileshare, ဖိုင်ကိုအပ်လုဒ်ကို ဒေသခံများထံမှမိုဃ်းတိမ်ကိုမှ
- file ကိုရှာဖွေရေး: ဖိုင် & folder ကိုရှာပါ
- ဝက်ဘ်အတွက် app ကို & FTP client အတွက် ftp server ကိုအတူ FTP ဖိုင် transfer protocol ဖိုင်ကို browser ကို
- Service ကို link တစ်ခုက share ကြောင့်ဖိုင်ဝေမျှဖို့။
ဒေါင်းလုပ် ဖိုင်မန်နေဂျာ app ကို ယခုသင်က Android မန်နေဂျာ tools တွေကိုတစ်အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာသို့မဟုတ်ဖိုင်ရှာဖွေသူ tool ကိုလိုလျှင်။
အကောင်းဆုံးဖိုင်မန်နေဂျာဟာ android များအတွက်ဖိုင်ကိုဘရောက်ဇာကို, ရှိသမျှဖိုင်စီမံခန့်ခွဲ, ဖိုင်တွဲ & လေကြောင်းဖိုင်လွှဲပြောင်း
v1.40: ဖယ်ရှားရေးတတိယပါတီ sdks
v1.37: သာ. ကောင်း၏ app ထဲမှာ Audio / Video ကစားခြင်း
v1.28: မိုဃ်းတိမ်ကိုကို item များအတွက်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွင်
v1.24: recycle bin ကိုဗလာမှ Option ကိုပိုမိုဖိုင်အခြေအနေပြ
v1.22: passcode ထောက်ခံ
v1.10: Fixed bug ကို SD ကဒ်ထဲမှာဖိုင်တွေဖတ်နေမဟုတ်ပါဘူး။
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က - Android အတွက် Explorer ကို File
14.31 ကို MB